Yintoni efunekayo ukuphumeza intengiso yokudala | Abadali be-Intanethi
Yintoni efunekayo ukufezekisa intengiso yokudala
Iris Gamen | 01/04/2022 20:00 | Ukuhlaziywa ukuba 31/03/2022 13:03 | Idizayini yeMifanekiso
Zonke iingcali kwihlabathi lezentengiso kunye nentengiso ziya kuba zivile ngaxesha lithile kumsebenzi wazo ukuba ukuze intengiso isebenze, kufuneka wenze iphulo elihle lokuthengisa. Ukuba impumelelo okanye ukungaphumeleli kwemveliso okanye inkonzo kuxhomekeke kuloo nto, kwelo phulo.
Ukuba umkhankaso wokukhangisa awulungile kwaye ngoko awusebenzi, wonke umsebenzi kunye nophuhliso emva kwalo luya kuba lungenamsebenzi. Ukuze konke oku kusebenze, kufuneka ufikelele kwinqanaba eliphambili, kwaye le ngongoma kukuphuhlisa intengiso yokudala.
Kwimihla yethu, sonke sichanabeke kwimiyalezo yentengiso engenakubalwa, omnye emva komnye, ebhasini, simamele unomathotholo, ngelixa sihamba... yimiyalezo ekhuphisanayo ukubamba ingqalelo yethu, ngenjongo yokuba sitye iimveliso zabo.
1 Yintoni ukuthengisa ngokuyilayo?
2 Izinto ezilungileyo zokuyila intengiso
3 imizekelo yoyilo lwentengiso
Yintoni ukuthengisa ngokuyilayo?
Njengoko sele sitshilo, oku "kutyumza" okuqhubekayo, siya kuthetha nge-colloquially, akuthethi ukuba iimpawu zifezekisa injongo ezicetywayo. Azingeni kuthi, ngoko ke imiyalezo yazo iyabhanga. Ziimpawu ezingazange zikwazi ukuxhaphaza ukubaluleka kwentengiso yokudala.
Ziibrendi, ezo abathi, ngoyilo lwabo kunye neqela leentengiso, baziswe Ukwahluke kwabanye abantu okhuphisana nabo ngezimvo ezintsha, eziya kwenza umtsalane kubathengi..
Yinkqubo enzima yophando, apho kufuneka babe Intelekelelo yangoku, ubuchule bokuyila kwaye ngaphezu kwawo onke amava. Asibhekiseli kwinto yokuba usebenze iminyaka emininzi, sibhekisa kumava athi umntu afumane xa ehlalutya ukhuphiswano, efunxa iingcinga ezintsha, zantlandlolo.
Intengiso yokudala ibaluleke kakhulu namhlanje. Kwaye oku kungenxa yokuba, ngokuqinisekileyo xa ufika ekhaya emva kwemini yonke ufunda okanye usebenza, awukhumbuli neentengiso ezimbini zokugqibela ozibonileyo phambi kokuba uhambe ngomnyango. Asizifundi iintengiso, sigcina ngokuthe ngqo ezingqondweni zethu oko sikufumanisa kunomdla, entsha.
Izinto ezilungileyo zokuyila intengiso
Iintengiso zentengiso zisinika i inzuzo ebaluleke kakhulu, kwaye oko kukuma ngaphandle kokhuphiswano lwethu oluthe ngqo. Ukuze umkhankaso wentengiso usinike loo mahluko kwaye ukwazi ukwenza abathengi bahlale nomyalezo, kufuneka ihlangabezane nale miba ilandelayo.
Ungoyiki ukwenza intengiso engaphandle kwesiqhelo. Akunyanzelekanga ukuba woyike ukugxekwa ukuze utsale umdla kwaye utsale uluntu.
Ukuba uqinisekile ngombono wokungoyiki, ke indlela elandelayo ekufuneka uhambe ngayo gxininisa kwisicwangciso esithe ngqo, oko kukuthi, ukuba nobudlova kunye neentengiso, rhoqo ngaphakathi kwezomthetho. Kufuneka ube nesibindi xa unxaxha.
Le ngongoma ibaluleke kakhulu, kufuneka sibe mafutshane, uluntu esiza kuthetha nalo lunemizuzwana nje embalwa yexesha labo phambi kokuba udlule, ngoko kufuneka ubale ulwazi oluchanekileyo.
Olu lwazi kufuneka yibonise ngokuthe ngqo nangobuchule, njengoko oku kuya kuba nempembelelo enkulu kwaye kunokunyusa umdla wombukeli.
Kwaye okokugqibela uphawu kunye nomxholo osebenza kuwo kufuneka uqhagamshelwe kakuhle kakhulu. Akuyi kuba yiphulo eliyimpumelelo, ukuba umbukeli ukhumbula ingoma kwaye akayikumaki, kufuneka akhumbule isethi.
imizekelo yoyilo lwentengiso
Ngexesha esikulo, kubaluleke kakhulu ukuphuhlisa imikhankaso yentengiso yokudala, kwaye ngaphezu kwakho konke, ukungena kwihlabathi le-Intanethi ukwenzela ukuba iimveliso zibekho kwimarike. Ukuhamba kwihlabathi ledijithali, ukuyila kumaphulo kubalulekile.
INetflix ithathwa njengenye yeebrendi eziphambili ngokwentengiso yokuyila Ngokubhekiselele koko, iiseyile zakhe ezibekwe kumbindi wezixeko ezikhulu ziye zaba ngumtsalane omkhulu yaye akukho mntu ungayekiyo ukuwafunda nokuwafota.
Netflix kunye nothotho lweNarcos. Iseyile etyhidiweyo kwiSol.
Netflix kunye nothotho Fe de ETA. ICanvas ibekwe eSan Sebastián
Iseyile evela kuthotho lwezeMfundo ngezoSondo, eGran Vía
Njengoko unokubona kule mizekelo ilandelayo, akasebenzisi nje kuphela iibhana kwiikhankaso zakhe zentengiso ezinyuswa kakhulu kwaye zigxekwa, kodwa uyaziqhelanisa nazo naziphi na iindlela.
INetflix ikhona nakwimetro yaseMadrid
I-Sex Education series marquee ifakwe eCuenca
Siye sakwazi ukuyiqinisekisa loo nto Akubalulekanga nje ukuyila kwiphulo lokudala, kodwa umzobo wekopi nawo ubalulekile, njengoko sibona kula maphulo ka-Uber.
Yiya apho ufuna khona ngo-Uber
Khwela no-Uber kwaye uqhubeke netheko
Hamba no-Uber ngaphandle koloyiko kwireyithi yakho
Olunye uphawu lokumkanikazi kwintengiso yokuyila yinkampani ye-Fedex courier. Ngubani kuyo yonke imbali yakhe ebesazi indlela yokunxibelelana noluntu ngendlela enobuchule.
Iphulo leFedex Neighbors Campaign, apho ifuna ukuqaqambisa isantya sayo sokuhanjiswa.
Amashishini eselula ebulela inkxaso yeFedex. Iphulo leFedex Mexico.
Ngokungathandabuzekiyo, olu luhlu kufuneka lubandakanye ezimbini kwezona ntlobo zinamandla zokutya okukhawulezayo kwihlabathi jikelele; McDonald's kunye neBurger King. Iimpawu ezimbini ezithe, ngokukhuphisana kwazo, zikwazile ukwenza imikhankaso yentengiso eyodwa nengenakuphinda iphindwe.
I-McDonalds ikhupha le perile incinci ngokulahla ukuba i-Burger King ikopisha ii-hamburgers zayo.
IMcDonalds ikhuthaza inkonzo yayo yonikezelo.
Ingaba yeyiphi iMcDonalds ekufutshane? Iitapile ziyakuxelela.
I-Wi-Fi yasimahla eMcDonald's
Burger King kunye nobuhle basebukhosini
Yiza njengomhlekisi kwaye udle njengokumkani. Kweli phulo, sinokubona ukuba ubhekisa njani kwi-clown yakwaMcDonalds ukusukela lowo usefotweni enxibe njengaye.
Inyama ibuthathaka, ixesha lemifuno liqala
Uthando olungenamiqathango phakathi kweBurger King kunye neMcDonalds. Iphulo eFinland libonisa uthando olukhoyo phakathi kwezi mpawu zimbini.
U-Burger King ethatha ithuba lomhla we-Pride eFinland ukusungula iphulo elitsha apho kubonakala khona iimascots ezimbini zekhonkco lokutya okukhawulezayo. Liphulo elibhiyozela uthando ngandlela zonke.
Kukho inyambalala yamaphulo entengiso yokuyila kwaye asikwazi ukuwaqokelela onke kwiposti enye. Yiyo loo nto senze indibanisela encinci yeyona mikhankaso idumileyo yokudala intengiso kumaxesha amva nje.
Khumbula ukuba ukwenza iphulo lokuyila lisebenze, kufuneka litsale umdla woluntu, libe nobuchule kwaye uluntu lulonwabele.. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba ukwazi ukudibanisa la mava kunye nophawu osebenza nalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yintoni efunekayo ukufezekisa intengiso yokudala
Izixhobo ze-Intanethi zokuguqula iifonti
iincwadi ezinamaqweqwe amahle